ပင်လယ်ကြီးဆီ သွားမယ်ဆိုရင် ဘယ်လို Style ထုတ်မလဲ? - Chelmo News Portal
Home›Fashion›ပင်လယ်ကြီးဆီ သွားမယ်ဆိုရင် ဘယ်လို Style ထုတ်မလဲ?
လူအများစုက ပိတ်ရက်မှာ မိသားစုနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် သန့်ရှင်းတဲ့ လေကို ရှုရှိုက်ဖို့ နဲ့ စိတ်အပန်းဖြေဖို့ အတွက် ကမ်းခြေကို သွားတတ်ကြပါတယ်။ ကမ်းခြေရောက်တဲ့ အခါ အရမ်းလှတဲ့ ရူခင်းတွေနဲ့ အထာကျကျ ဓာတ်ဖမ်းဖို့ အတွက်ဆိုရင် အမိုက်စား ဝတ်ဆင်တတ်ဖို့လည်း လိုတယ်နော်…ဒါကြောင့် ကမ်းခြေသွားရင် ဝတ်ဆင်သင့်တဲ့ ဖက်ရှင်လေးတွေကို မင်မင်က ပြောပြပေးသွားမယ်နော်…
ကမ်းခြေဆိုတော့ Swimsuit က မပါမဖြစ်ပေါ့။ ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်ပြီး အဆင်ပြေမယ့် ဝတ်စုံကို ရွေးချယ်တတ်ဖို့က အရမ်း အရေးကြီးပါတယ် (ဝယ်ပြီးမှ မဝတ်ရဲလို့ ချောင်ထိုးထားရတဲ့ အဝတ်တွေ များနေပြီ မဟုတ်လား) အတို၊ အရှည် ပုံစံ မျိုးစုံရှိတဲ့ အထဲကမှ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူပါနော်…
ဦးထုတ်လေးတွေကတော့ နေရောင်ခြည်ဒဏ်ကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ အပြင် ဓာတ်ပုံရိုက်ရင်လည်း ဖက်ရှင်ကျကျ လှနေစေမှာပါ။ ကမ်းခြေရဲ့ အငွေ့အသက်လေး ဆိုရင်လည်း မမှားဘူးပေါ့။ Beach သွားမယ်ဆိုရင် အဝိုင်းကားကား ဦးထုတ်လေးတွေက နေရောင်ခြည် ကာကွယ်တဲ့ အပြင် ပျိုမဒီလေးတွေကို စတိုင်လ်ကျ လှပနေစေမှာပါ။
နေကာမျက်မှန်လေးတွေက မျက်လုံး ကျန်းမာရေးအတွက် သာမက Fashion အရပါ အရေးကြီးတဲ့ အရာလေး တစ်ခုပါ။ Swimsuit လေးတွေ၊ ShowerOff လေးတွေ ဝတ်တဲ့အခါ မျက်မှန်လေးတပ်၊ ဦးထုတ်အဝိုင်းလေးဆောင်းထားမယ်တိုရင် ဘယ်လောက်များ မိမိုက်နေလိုက်မလဲ…
(4) Jean Shorts
ဂျင်းဘောင်းဘီ အတိုလေးတွေကလည်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြစ်စေတဲ့ အတွက် ကမ်ခြေသွားတဲ့အခါ မပါမဖြစ် ယူသွားသင့်ပါတယ်။ T-shirt၊ ကြိုးတစ်လုံးလေးတွေ၊ Croptop လေးတွေ၊ Should Off လေးတွေနဲ့ တွဲဝတ်မယ်ဆိုရင် အရမ်းကို အထာကျပြီး လိုက်ဖက်မှုလည်း ရှိပါတယ်။ ကမ်းခြေနဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ Showeroff လေးတွေ ဝတ်ဆင်တဲ့အခါ အပေါ်ထပ် ဇာပါးပါးလေး ထပ်ဝတ်မယ်ဆိုရင်လည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ စတိုင်ကျနေမှာပါ။
(5) Dress လှလှလေးတွေ
Dress လှလှလေးတွေကတော့ Beach Fashion အတွက် ထည့်သွားသင့်ဆုံး အရာတစ်ခုပါ။ အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင် ကျောအလှလေးတွေကိုမှ အရှည်၊ အတို၊ ဘေးကွဲ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဒီဇိုင်းမျိုးစုံကို ရွေးချယ်လို့ ရပါတယ်။ Floral Dress လေးတွေကလည်း ကမ်းခြေမှာ လွင့်နေတဲ့ ပန်းပွင့်တစ်ပွင့် အသွင်ဆောင်စေမှာပါ။ Jumpsuit လေးတွေကလည်း အပေါ်အောက် တွဲဖို့ ခေါင်းစားစရာ မလိုဘဲ စတိုင်ကျစေမှာပါနော်။
ဖိနပ်လေးတွေ ဆိုရင်တော့ Beachဖြစ်တဲ့ အတွက် Sandal လေးတွေ၊ Slipperလေးတွေက ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ ခြေညှပ်ဖိနပ် လှလှလေးတွေ၊ ကြိုးသိုင်းလှလှလေးတွေ၊ ခြေသလုံးထိ ခြည်လို့ရတဲ့ ကြိုးလေးတွေပါတဲ့ ခြေညှပ်အပါးလေးတွေလည်း စီးရတာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဖြစ်စေပြီး Fashion လည်း ကျပါတယ်။
Fashion ကျဖို့ မပါမဖြစ်လေးကတော့ Fancy Accessories လေးတွေပါပဲ။ နားစွဲအရှည်လေးတွေ၊ နားကွင်း၊ ဆွဲကြိုး၊ ခြေကွင်း၊ လက်စွပ် အစရှိတဲ့ Fancy ပစ္စည်းလေးတွေပါ တွဲဖက် ဝတ်ဆင်လိုက်ရင် ပိုအထာကျစေမှာပါ။
နောက်ဆုံး အနေနဲ့ ဖက်ရှင်ကျကျ လှေနေရုံနဲ့ မပြီးသေးပါဘူး။ ကမ်းခြေဖြစ်တဲ့ အတွက် အသားအရေ ထိန်းသိမ်းဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နေလောင်ဒဏ် ကာကွယ်ဖို့ အတွက် SunCream လေးတွေက မဖြစ်မနေဆောင်သွားသင့်ပါတယ်။ နေလောင်ပြီး အမဲကွက်တွေ ဖြစ်တဲ့ဒဏ်မှ ကာကွယ်ဖို့ အတွက် Scrup လေးသုံးပြီး နေလောင်ခံ Lotion လေးလည်း လူးပေးပါနော်…
#Chelmo #ChelmoTeam #TravelTips #Beach
Disney + မှာ ပြသမယ့် The Mandalorian စီးရီး ...